induction kupisa system technology PDF wongororo kurodha
Induction Heating Technology Ongorora
Ese IH (induction kupisa) masisitimu anoshandiswa anogadzirwa achishandisa electromagnetic induction iyo yakatanga kuwanikwa naMichael Faraday muna 1831. Electromagnetic induction Heating inoreva chiitiko icho iyo magetsi iripo inogadzirwa mudunhu rakavharwa nekushanduka kwezvazvino mune rimwe dunhu rakaiswa padivi payo. Hwaro hwepfungwa hwekupisa kupisa, iri fomu yakawanikwa yekuwanikwa kwaFadaday, inyaya yekuti AC iripo inoyerera mudunhu inokanganisa mafambiro emagineti wedunhu redunhu iripo padyo. Iko kusandudzika kwazvino mukati medunhu redunhu kwakapa mhinduro yekuziva kuti zvinoshamisa sei zvazvino. Kuwanikwa kwaFadaday kwakatungamira kukudziridzwa kwemagetsi motors, jenareta, vashanduri, uye michina yekutaurisa isina waya. Mashandisiro azvo, zvisinei, ave asina mhosva. Kupisa kupisa, kunoitika panguva induction kupisa maitiro, yakanga iri musoro mukuru uchishungurudza kushanda kwese kwesistimu. Vatsvagiri vakatsvaga kudzikisira kurasikirwa nekupisa nekumisa magirafu emagineti akaiswa mukati me mota kana switcher. Mutemo waFaraday wakateverwa nehuwandu hwezvakawedzera kuwaniswa seMutemo waLentz. Mutemo uyu unotsanangura chokwadi chekuti induction yazvino inoyerera isingasviki kunzira yekuchinja kwemaitiro emagineti yekufambisa.
Kupisa kupisa, kunoitika mukati megadziriro yemagetsi, kunogona kushandurwa kuve siki yekupisa simba mumagetsi induction heat system nokushandisa mutemo uyu. Maindasitiri mazhinji akabatsirwa neichi chiitiko nyowani nekushandisa yekudziisa induction yekuvesa, kudzikamisa kudzimisa, uye kumwaya. Mune izvi zvinoshandiswa, kupisa induction kwakaita kuti zvive nyore kumisikidza maparamendi ekupisa- kunze kwekudiwa kwesimba rekuwedzera rekunze. Izvi zvinonyanya kudzora kupisa kurasikirwa apo uchichengetedza nzvimbo iri nyore yekushanda. Kusavapo kwechero kusangana panyama nemidziyo yekupisa kunodzivirira njodzi dzisingafadzi dzemagetsi. Kuwanda kwesimba kunowanikwa nekugadzira simba rakaringana remhepo mukati menguva pfupi ……
Categories Kupinza Kupisa PDF Tags yakakwirira frequency tembiricha pdf, induction hita pdf, induction Heating mudziyo pdf, induction kupisa midziyo pdf, induction Heating muchina pdf, induction kupisa pdf, induction kupisa simba pdf, induction Heating system pdf, induction kupisa tekinoroji pdf, pdf yekudziya kupisa Post navigation